“Madaxweyne Farmaajo badda ayuu macaaneyn lahaa haddii wakhti kale la siiyo” – Kalfadhi
“Madaxweyne Farmaajo badda ayuu macaaneyn lahaa haddii wakhti kale la siiyo”
Qaar kamid ah shacabka magaalada Muqdishu oo aan cod-baahiyaha Kalfadhi.com la dhex qaadnay, ayaa aaminsan in dowladda madaxweyne Farmaajo ay wax badan qabatay afartii sannadood ee la soo dhaafay, halka qaar kale ay aaminsanyihiin in dowladda ay meelo badan ka gaabisay.
Mid kamid ah dadkii aan la hadalnay ayaa sheegay in dowladda lagu xusuusto wax-qabadkeedii dhinaca nabad-gelyada, dhaqaallaha, mushaarka ciidanka iyo shaqaallaha dowladda.
“Badda ayuu macaaneyn lahaa madaxweyne Farmaajo haddii loo sugo oo muddo kale loogu daro balse ma dhicin. Caqabad kasta oo uu la kulmay wey hortaalaa qof kasta oo dalkan madax ka noqda. Waa madaxweyne dedaalay oo wax badan qabtay, haddii uu maalmo sii wadi lahaana xukunka, halkaasi wuu kasii kordhin lahaa dedaalkiisa”, ayuu yiri.
Dhinaca kale Maxamed Siciid, ayaa dhankiisa xusay in afartii sannadood ee la soo dhaafay ay dhibaatooyin badan oo ay ugu horreeyaan qaraxyo ay dalka ka dhaceen, dagaallo, amni daro iyo waxyaabo badan oo aad loo dhibsanayo.
Mid kamid ah ballan-qaadkii ugu weynaa ee madaxweyne Farmaajo ee aan fulin ayaa ahaa in xukuumaddiisu ay Al Shabaab uga adkaanayso laba sano.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa Madaxweynaha Soomaaliya loo doortay, 8-dii Febraayo 2017-ka, isaga oo ballan-qaaday in uu horseedayo is-baddel weyn, sugayo amniga, xasilinayo siyaasadda, kobcinayo dhaqaalaha, la dagaallamayo musuq-maasuqa, uuna la imaanayo siyaasad arrimo dibadeed oo sarraysa.
Haddaba akhristayaasheena waxaan weydiineynnaa waxa ay ku xusuustaan dowladda madaxweyne Farmaajo?
Ra’iisul Wasaare Rooble oo maamulka Hirshabelle ku booriyay u diyaar-garowga doorashada Golaha Shacabka
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo faray xukuumada dardar-gelinta doorashada Golaha Shacabka iyo Golaha Deegaanka